Akụkọ Bible: Site ná Mgbapụta n’Ijipt Ruo n’Eze Mbụ nke Izrel - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
Mozis si n’Ijipt, bụ́ ebe ụmụ Izrel gbara ohu, duru ụmụ Izrel ruo n’Ugwu Saịnaị, bụ́ ebe Chineke nyere ha iwu ya. E mesịa, Mozis zipụrụ ndị ikom iri na abụọ ịga ledoo ala Kenan. Ma mmadụ iri n’ime ha bu akụkọ ọjọọ lọta. Ha mere ka ụmụ Izrel chọwa ịlaghachi Ijipt. N’ihi enweghị okwukwe ha, Chineke nyere ụmụ Izrel ahụhụ site n’ime ka ha wagharịa n’ime ọzara ruo afọ iri anọ.
N’ikpeazụ, a họpụtara Jọshụa iduru ụmụ Izrel banye n’ala Kenan. Iji nyere ha aka inweta ala ahụ, Jehova rụrụ ọrụ ebube ụfọdụ. O mere ka Osimiri Jọdan kwụsị ịsọ asọ, mee ka mgbidi Jeriko daa, meekwa ka anyanwụ kwụrụ otu ebe ruo otu ụbọchị zuru ezu. Mgbe afọ isii gasịrị, a napụrụ ndị Kenan ala ahụ.
Malite na Jọshụa, ndị ikpe chịrị ụmụ Izrel narị afọ atọ na afọ iri ise na isii. Anyị ga-amụ banyere ọtụtụ n’ime ha, gụnyere Berak, Gidiọn, Jefta, Samsin, na Samuel. Anyị ga-agụkwa banyere ndị inyom dị ka Rehab, Debọra, Jel, Rut, Neomi, na Delaịla. NKEBI NKE 3 kọrọ ihe ndị mere n’ime narị afọ atọ na iri afọ itoolu na isii.